Jiilka Ugu Wanaagsan-Saddexaad Undercut Anchor soo saaraha iyo Warshad | Feejignaan
Qalliinka 'Dorsal suppository'
Qeybta 'barroosinka' waxaa loo isticmaali karaa dhagax adag oo dabiici ah ≥15mm, sofdhagaxa t ≥20mm; ku habboon dhumuc kale loox isku dhafan, looxyada sibidhka sibidhka, dhumucdiisuna ≥16mm, imaatinka looxyada iyo kala-bixidda looxyada dhinacyada.
Qaybta barroosinka waxaa loo isticmaali karaa dhagax adag oo dabiici ah ≥15mm, dhagax jilicsan ≥20mm; oo ku habboon loox kale oo isku dhafan, looxyo dhejis ah oo sibidh ah, dhumucdiisuna tahay mm16mm, kuwa imanaya looxyada iyo kala-goynta looxyada dhinacyada.
Ku habboon dhammaan noocyada taarikada
Shuruudaha dhumucda hooseeya
Kala duwan oo dulqaad dhismaha
Awood farsamo oo weyn
Waxqabadka dhul gariirka heer sare
Baaxadda ballaaran ee dhibcaha barroosinka saxanka
-Darajinta saamaynta guddiga
Rakibidda saxanka 0 Heerka Burburka
Naqshadeynta patent-ka-dabacsan, qodobka amniga 100%
Naqshadeynta anti-dabacsan ee gaarka ah waxay si wax ku ool ah u ciyaari kartaa doorka ka hortagga dib-u-gurashada iyo ka-hortagga dabacsan iyo hagaajinta amniga. Isla mar ahaantaana, qaladka qoto dheer ee qoditaanka ee gadaasha gadaal ayaa ka hooseeya, iyo heerka badbaadada barroosinka ayaa la hagaajiyay.
Naqshadaynta daahan, si waxtar leh u dheereeya nolosha adeegga
Titanium-plated A4 bolves back steel bolts are more resistance to corrosion and can be Apply in a variety of complex and xaaladaha adag, kordhiyo nolosha adeegga ee dhejiyeyaasha iyo in la hubiyo nabadgelyada muddada-dheer ee darbiga daahyada.
Rakibaadda korontada, ku habboon oo wax ku ool ah, saaxiibtinimo u leh saxanka
Ka duwanaan ku rakibida gacanta, rakibaadda korontada saameyn yar ayey ku leedahay guddiga, heerka burburka oo hooseeya, wuxuu si wanaagsan u ilaalin karaa guddiga, waxaana lagu dabaqi karaa rakibidda qallalan ee darbiyada daahyada ee xaaladaha gaarka ah ee kala duwan. Rakibaadda-korontada oo dhami waxay leedahay wax-qabad sarreeya, dhisme ku habboon oo wax-tar badan
Magaca Sawirka: Barroosinka Dhawr-Jireed ee Prudential-Saddexaad
3 hoosta xargaha xargaha xargaha
Nidaamka gadaal-gadaasha ee gadaal-gadaasha ayaa si wax ku ool ah u hagaajin kara darbiyada daahyada kala duwan. Habka qarsoon ee "cut wedge cut" wuxuu ku habboon yahay dhismooyinka kala duwan ee qurxinta gudaha iyo dibedda. Waa nidaam ka kooban biraha gadaal birta ah ee birta ah, isku xirayaasha isku-darka aluminium, iyo birta birta ah. . Horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo hagaajinta tayada nolosha dadka, shuruudo sare ayaa loo soo bandhigayaa tayada deegaanka lagu nool yahay, taas oo kor u qaadeysa horumarinta warshadaha qurxinta derbiga daah. Isticmaalka baahsan ee dhagxaanta, looxyada dhoobada ah, iyo looxyada dhoobada ah ee darbiyada daahyada, shuruudaha sare ayaa loo soo bandhigayaa waxqabadka amniga iyo farsamada dhismaha ee darbiyada daahyada.
Waxay ku siin kartaa culeyska ugu badan waxayna hubin kartaa in guddiga uusan ku xirnayn culeys gudaha ah oo ay sababtay soo bixitaanka qeybta dambe. Waxay ku habboon tahay looxyo kala duwan oo ah 8mm-30mm.
Hore: Xirmooyinka Xoogga Sare Epoxy Adhesive Invented Cone Anchor Bolt
Xiga: bir bir bir ah oo birta ah oo birta ah oo birta loogu xiro nidaamka hagaajinta dhagaxyada
barroosinka birta birta ah ee birta ah ee birta ah ...